Yekutenga Nguva & FAQ - Pandawill Technology Co, Ltd.
Inoita sei Pandawill odhita zvinhu zveTendeuka-Kiyi maodha?
Isu tinoraira kune yako chaiyo bhiri yezvinhu kuodha 5% kana 5 yekuwedzera kune akawanda zvikamu. Dzimwe nguva isu tinotarisana neashoma / akawandisa maodha uko zvimwe zvikamu zvinofanirwa kutengwa. Idzi zvikamu zvinogadziriswa, uye mvumo inogamuchirwa kubva kumutengi wedu usati waodha.
Pamabasa-ekiyi mabasa, chii icho Pandawill chinoita nezve chikamu kuyambuka kana kutsiva?
Pandawill inogona kubatsira kubata zvinyorwa, asi isu hatisi kutsiva zvikamu pane yako bhiri yezvinhu nezvikamu zvatatova nazvo. Tinogona kutaura nezveyambuko kana kubatsira nechisarudzo chezvinhu kana zvichidikanwa, asi isu tinotumira data pepa kunoda kubvumidzwa kwevatengi usati waodha.
Ndeipi inguva yekutungamira pane yekuchinja-kiyi odha?
1.Procurement inotungamira nguva iri mukuwedzera kune gungano rinotungamira nguva.
2.Kana tikaraira mabhodhi edunhu, kazhinji kazhinji ino ndiyo nguva yakatungamira yekutungamira, uye inoonekwa nezvinodiwa nevatengi.
3.Zvinhu zvese zvinofanirwa kugamuchirwa usati watanga chikamu chemusangano cheodha.
Inogona here Pandawill odha chete zvinoriumba kana chete yangu redunhu bhodhi?
Ehe, isu tinogona kuraira izvo chete zvaunoda isu kuti tipe, uye iwe unogona kugovera izvo zvasara. Isu tinoreva kune iyi mhando yeodho sebasa rekutendeuka-kiyi basa.
Chii chinoitika kune zvakasara zvinhu pane Turn-Kiyi maodha?
Zvimisikidzo zvine zvishoma zvinodiwa kutenga zvinodzoserwa nemaPCB apera kana Pandawill inobatsira kubata zvinyorwa sekukumbirwa. Zvimwe zvese zvinhu hazvidzorerwe kumutengi.
Chii chandinoda kutumira kune yekushanduka-kiyi odha?
1.Bill yezvinhu, izere neinfo mune yakanakisa fomati.
2.Complete info inosanganisira - zita remugadziri, chikamu chikamu, Ref dhizaini, chikamu tsananguro, huwandu
3.Zadza maGerber mafaera
4.Centroid dhata - iyi faira inogona kugadzirwa nePandawill kana zvichidikanwa.
Ko zvakadiniko nezve hunyoro zvinhu?
1.Mazhinji ma SMT epakeji mapakeji anonhonga hunyoro hushoma nekufamba kwenguva. Kana izvi zvikamu zvikaenda kuburikidza neyakavhenekerwa ovhoni, iyo mwando inogona kuwedzera uye kukuvadza kana kuparadza chip. Dzimwe nguva kukuvara kunogona kuoneka nemaziso. Dzimwe nguva haugone kuzviona zvachose. Kana isu tichida kubika zvinhu zvako, basa rako rinogona kunonoka kusvika maawa makumi mana nemasere. Ino nguva yekubheka haizoverengera kune yako yekutsva-nguva.
2. Isu tinotevera iyo JDEC J-STD-033B.1 yakajairwa.
3. Zvinorevei kuti kana chinhu ichocho chakanyorwa sekunyorova kwehunyoro kana chakavhurika uye chisina kunyorwa, tichaona kana ichida kubikwa kana kukufonera kuti uone kana ichida kubikwa.
4.Pana 5 ne10 mazuva anotendeuka, izvi zvimwe hazvizokonzere kunonoka.
5.Pana makumi maviri nemana nemaawa makumi mana emabasa, kudiwa kwekubheka zvinhu zvinokonzeresa kunonoka anosvika maawa makumi mana nemasere ayo asingazoverengerwa kune yako tune nguva.
6.Kana zvichibvira, gara uchititumira zvinhu zvako zvakavharwa mupakeji iwe yawakavatambira.
Ini ndinodikanwa sei kupa zvinhu?
Bhegi rega rega, tireyi, nezvimwe zvinofanirwa kunyorwa zvakajeka nenhamba yenhamba yakanyorwa pane rako gwaro rezvinhu.
1.Ichienderana nebasa regungano raunosarudza, tinogona kushanda nekucheka tepi yehurefu hwese, machubhu, reels nematray. Isu tinofungidzira kutarisirwa kuchatorwa kuchengetedza huchokwadi hwezvinhu.
2.Kana zvikamu zvine hunyoro kana zvimire zvinyoro nyoro, ndapota peta zvakafanira mune inochengetedzwa inodzorwa uye / kana yakavharwa kurongedza.
3.SMT zvikamu zvinopihwa zvakasununguka kana muhuwandu zvinofanirwa kutariswa senzvimbo dzekuisa-gomba. Iwe unofanirwa kugara uchisimbisa nesu kutanga usati watora basa rine zvakasununguka SMT zvinhu. Kuzvitumira zvakasununguka zvinogona kukonzera kukuvara uye zvinogona kukubhadharira mari mukubata. Zvinenge nguva zhinji zvinodhura kutenga mutsara mutsva wezvinhu kuti tiedze kuzvishandisa zvakasununguka.